बढ्दो कम्मर स्वस्थ्यको लागि खतरनाक साबित हुनसक्छ !!! – Online Bichar
बढ्दो कम्मर स्वस्थ्यको लागि खतरनाक साबित हुनसक्छ !!!
Online Bichar 25th November, 2018, Sunday 9:32 PM
तौल सामान्य तर कम्मर मोटो तथा उमेर कम छ भने त्यसलाई जोखिमपूर्ण मानिन्छ जसलाई हल्का रूपमा लिनु हुँदैन । यस्तो अवस्थामा आफू ओभर वेट नभएकाले कुनै प्रकारको शारीरिक श्रम वा व्यायामको आवश्यकता छैन भनेर सोच्नु गलत हुनसक्छ । एउटा अध्ययनअनुसार महिलाहरूमा तौलको तुलनामा कम्मर ठूलो हुनु खतरनाक साबित हुनसक्छ । एउटी मोटी महिलाको तुलनामा मोटो कम्मर भएकी महिलामा ह्दय रोग, क्यान्सर आदिको सिकार हुने सम्भावना सामान्य र पातलो कम्मर भएकी महिलाको तुलनामा बढी हुन्छ ।
केही समय पहिले अन्तर्रा्ष्ट्रिय स्तरमा गरिएको एक अध्ययनका लागि ४४ हजार ६ सय महिला नर्सलाई छनोट गरिएको थियो, जसको उमेर ४० देखि ६० वर्षबीच थियो । उनीहरूको कम्मर र नितम्ब नापिएको थियो । हरेक दुई वर्षपछि यो नाप लिने कामलाई जारी राखियो । जुन समयमा ती नर्सको छनोट गरिएको थियो त्यतिबेला उनीहरूलाई कुनै प्रकारको गम्भीर रोग थिएन । साधारणतया स्वस्थ महिलाको कम्मर ३४ दशमलव ६ इन्चभन्दा कम हुनुपर्छ । कम्मर र नितम्बको अनुपात एक प्रतिशतभन्दा पनि कम हुनुपर्छ । यो अनुपात निकाल्न कम्मरको नापलाई नितम्बको नापबाट विभाजित गरिन्छ ।